Ny fanambaran'ny filoha Marc Ravalomanana voarakitra an-tsoratra | Hevitra MPANOHARIANA |
Ny fanambaran'ny filoha Marc Ravalomanana voarakitra an-tsoratra
2009-08-09 @ 12:00 in Politika
Nanao fanambarana ny filoha Ravalomanana tamin'ny sasak'alin'ny 08/08/09 hifoha 09/08/09 nialoha ny fanaovan-tsonian'ny satan'ny tetezamita iraisana. Toy izao manaraka izao izany fanambarana nataony tany Maputo, Mozambika izany:
Ry Malagasy mpiray tanindrazana, ny voaloha-teniko dia fisaorana an'Andriamanitra, noho ny fitahany ka nahatongavantsika amin'izao tanjona fampihavanam-pirenena izao. Nandalo fotoan-tsarotra tokoa mantsy ny tanindrazantsika hatramin'ny voalohan'ny volana fevrie taona 2009 ka hatramin'izao. Voatohina mafy ny fihariam-panjakana sy ny firaisam-pirenena satria nisy ny fandrombaham-pahefana. Mitontongana ny fiharian-karena ary miharatsy ny fifampitokisan'ny Malagasy, sy ny soatoavina malagasy... Koa hamerenana haingana ny fandriampahalemana sy ny filaminana ary hanarenana ny toe-karena dia heveriko fa tonga ny fotoana andraisan'ny mpitarika politika rehetra andraikitra eo anatrehan'ny tantara ary hametraka amin'ny toerana maha-izy azy ny tombontsoam-pirenena sarobidy loatra ary manan-kasina ny tanindrazantsika ka dia natao takalon'aina ny vahoaka malagasy(...) Ambarako fa tsy izaho velively no sakana amin'ny ahitantsika lalan-kivoahana amin'izao krizy mitranga amin'ny firenentsika izao.
Amin'ny maha-filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny tenako, mpitandro ny firaisam-pirenena, dia manambara amin-kitsim-po aho fa vonona hampangina ny hambom-po maha-olombelona, hikatsaka vaha-olana iraisana amin'izao krizy mitranga amin'ny firenentsika izao; ary matokisa ahy ry vahaoaka malagasy fa fitandrovana ny tombotsoa ambonin'ny firenena dia heveriko fa fahendrena ny tsy handraisako anjara ny rafi-pitantanana ny tetezamita iraisana nefa kosa ny movansa Marc Ravalomanana, mandala ny ara-dalàna dia mandray anjara mavitrika amin'izany. Hiverina an-tanindrazana tokoa aho araka ny efa nambarako hatramin'izay, ka matokia ahy ianareo, aza matahotra, minoa fotsiny ihany.
Manao antso avo amin'ny mpitondra politika rehetra aho hametraka ny tombotsoam-pirenena ambonin'ny zavatra rehetra. Mangataka antsika rehetra aho hitandro hatrany ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Andeha isika hanokatra pejy vaovao ho an'ny firenentsika ary hifantoka amin'ny hoavy. Midera tanteraka ny herimpo mariky ny fitiavantanindrazana nasehonareo rehetra aho tamin'ny fiarovana ny Lalampanorenana sy ny ara-dalàna.
Misaotra ny vahoaka malagasy aho, indrindra ireo mpanohana ahy, ireo rehetra nametraka tamiko ny fitokisany ary nitondra ihany koa ny anjara biriky amin'ny fikatsahana vahaolana iraisana sy filaminana amin'izao krizy ivoahantsika izao. Miantso ny tsiairay aho, izay tandrify, mba hanao araka izay azo atao amin'izao tetezamita iraisan'ny Malagasy rehetra izao hananganantsika an'i Madagasikara vaovao. Matoky isika fa horaiketin'ny tantara izao fitiavan-tanindrazana nasehontsika rehetra izao. Isaorako manokana ny Malagasy nametraka izay rehetra vitantsika...miasa miaraka isika.
Isaorako ireo Fianakaviam-be iraisam-pirenena, ireo mpiara-miombon'antoka amintsika, indrindra indrindra ny fikambanana SADC, ny Vondrona Afrikana, ny OIF, ny firenena mikambana ary ireo iraka manokana tamin'ny fandraisana anjara mavitrika hitadiavana vaha-olana maharitra hiverenan'i Madagasikara ankehitriny ho ao anatin'ny Fianakaviam-be iraisam-pirenena tokoa i Madagasikara fa tsy maintsy atao izay hanampiana azy. Manolotra fisaorana manokana ny andriamatoa sy filoha Joachim Chichano sy ireo mpiara-miasa aminy tamin'ny ezaka rehetra natao nahatanteraka amin'izao fiaraha-miasa (miaraka) izao. Mankasitraka manokana ny filoha sy ny governemanta ary ny vahoaka Mozambikana aho izay nandray sy nampiatrano ny fivorian'ny mpitarika efa-tontan'i madagasikara ary nahazoam-bokatra izany...
Misaotra ihany koa ireo mpitarika politika telo mirahalahy aho miaraka amin'ny delegasionany avy niainga avy any Madagasikara ho tonga eto Mozambika. Horaiketin'ny tantara ny ezaka sy ny fitiavana nasehontsika, fitadiavana vahaolana maharitra amin'izao fahasahiranana mahazo ny firenentsika izao, hampanjaka ny fihavanampirenena sy ny fananganana firenena vanona isika... mba hahazoantsika an'i Madagasikara vaovao.
Eto am-pamaranana ary, dia mirary soa anareo rehetra aho, indrindra ianareo izay hitondra ny tetezamita mba hahavita an-tsakany sy andavany ny andraikitra rehetra iantsorohanareo. Homba antsika mandrakariva anie Andriamanitra.
jentilisa 09 aogositra 2009